Samsung Kies ka dhigayaa mid aad u fudud ee dhamaadka isticmaala inay gurmad iyo soo celinta xogta ka iyo qalabka Samsung, tusaale ahaan sida caadiga ah casriga ah iyo kiniiniyada. Si kastaba ha ahaatee, wax dhici karta in aad hesho kharriban oo waxaa ka buuxda mashaakil marka aad qorshaynayso in ay u baddashaan qalab socda nidaamka qalliinka ka boosteejo ah oo kala duwan wadajir.
Tusaale ahaan, haddii aad isticmaalayso casriga ah Samsung iyo haatan qorshaynayaan in ay u baddashaan iPhone socda macruufka 9, waxaad la kulmi karaan xilliyada adag halka wareejinta xogta aad ka phone jir ah mid cusub. Workaround A noqon kartaa in ay dib u kor xogta ka phone jir ah, oo la soo celiyo waa in aad iPhone, laakiin xitaa haddii ay taasi aad u baahan tahay barnaamij-dhexaadin ka garataan waxaad dhahaysaan naqshadaha labada dhufto oo iyaga la xiriiri kartaa si siman.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida aad isugu xiri karaan farqiga u dhaxeeya labada dhufto oo si fudud u soo celin doono Kies files gurmad aad u cusub (ama xitaa jir) iPhone socda macruufka 9.
Samsung Kies ee kaabta faylasha
Si ka duwan qalab gurmad iyo dib u soo celinta kale in la abuuro hal file gurmad ah, Samsung Kies abuuraa files badan la kordhin kala duwan. Marka aad la abuuro gurmad ah ee aad qalab Samsung oo isticmaalaya Samsung Kies, xiriirada, fariimaha, abuse call oo aadna ku badbaaddeen sida .SBP, .SME, iyo .SCL siday u kala horreeyaan gudbiyo. Macluumaad ah ee gurmad iyo files gurmad Dhamaan waxa lagu kaydiyaa file a .XML baahisey, iyo dhammaan faylasha lagu kaydiyey gal ah si toos ah u abuuray in uu leeyahay magaca nooc ka mid ah qalabka Samsung.
Iyadoo dib u soo celinta xogta ka gurmad Samsung Kies, files la kordhin ay file baahisey la akhriyi barnaamijyada dib u soo celinta, iyo macluumaadka ku kaydsan la soo celiyo qalabka bartilmaameedka.
In kasta oo ay hayaan abuuray isticmaalaya Kies Samsung karo si fudud loo soo celiyo si ay qalabka Samsung oo isticmaalaya laftiisa Kies, si ay u soo celiyaan xogta in qalab kale oo kasta, gaar ahaan socda nidaamka qalliinka ka boosteejo ah oo kala duwan, waa in aad ku tiirsan yihiin codsi kasta oo cid saddexaad in uu yahay awood la xidhiidhka ay hindiseen labada dhufto si fudud.
By default, Samsung Kies qabaneysa faylasha gurmad in:
\_ Users \_ \_ Documents My \_ Samsung \_ Kies | Kies3 \_ gurmad \_ \_ _ \_ _
C: \_ Users \_ Vivek \_ Documents My \_ SM-N910 Samsung \_ Kies3 \_ gurmad \_ \_ SM-N910_ + 10000000000 \_ SM-N910_20151027035800
Sida loo soo celiya Samsung Kies kaabta File in macruufka 9
Sida kor ku xusan, si ay u soo celin xog ka Samsung Kies in an macruufka 9 qalab, waa in aad ku tiirsan yihiin barnaamij-saddexaad waa in ay awoodaan in ay fahmaan oo ay ula xiriiraan hindiseen labada dhufto ee ku.
Wondershare Shaqo weyn horumarinta qalab wax ku ool ah loo yaqaan MobileTrans in xiri karaan farqiga u dhexeeya qalabka socda nidaamyada hawlgalka ka horumarinta kala duwan. Wondershare MobileTrans Ma aha oo kaliya kaa caawinaysaa in aad la abuuro iyo soo celin hayaan, waxaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan aad xiriirada, fariimaha, iyo macluumaad kale oo ka mid phone in kale si toos ah adiga oo isticmaaleya isticmaale PC sida qalab-dhexaadin. Qaybta ugu fiican yahay, xogta loo gudbin karaa eegin oo ka mid ah dhufto ee nidaamyada hawlgalka ka mid ah qalabka ku xiran ee.
Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee in Wondershare MobileTrans dalabyo in dadka isticmaala ay ka mid ah:
• Phone in Transfer Phone - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah u gudbiyaan xogta aad ka mid phone in kale. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa, xirmaan il iyo bartilmaameed labada telefoonada si aad u computer isticmaalaya cable xogta baahisey isku mar.
• kaabta - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dib ilaa xogta ka smartphone ama kiniin loo eegin madal ee nidaamka qalliinka waxa ay leedahay.
• Soo Celinta - Iyadoo Doorashadan, waxaad soo celin karaa xogta ka Wondershare MobileTrans ah, Samsung Kies, Lugood, iCloud, ama gurmad BlackBerry files.
• Device Full Nadiifinta - Doorashadan waxa kuu ogolaanayaa inaad masixi dhammaan xogta ka qalab xiran, iPhone 4s socda macruufka 9 kiiskan, sidaas taas oo u eg mid cusub in la iibin karaa qof kasta oo aan ka werwerayn oo ku saabsan xogta shakhsiga aad ku heli bandhigi aan la ogalayn / dadka aan la rabin.
Inkastoo Wondershare MobileTrans ayaa diyaar u ah kombiyuutarada labada Windows iyo Mac, waqti of qoraal this, kaliya version Windows barnaamijka awood u soo celinta ee gurmad Samsung Kies in qalab macruufka 9 ah.
The tilmaamaha tallaabo-tallaabo in la soo celiyo gurmad Samsung Kies si iPhone ah ordaya macruufka 9 isticmaalaya Wondershare MobileTrans la siiyaa hoos ku qoran:
1. Isticmaal link kor ku xusan in ay soo baxdo iyo rakibi Wondershare MobileTrans on your computer Windows.
2. Isticmaal cable asalka xogta USB in ay ku xidhmaan aad iPhone socda macruufka 9 in kombuutarka.
3. Xir Lugood haddii ay si toos ah u bilawday.
4. Daahfurka Wondershare MobileTrans.
5. Laga soo bilaabo interface ugu weyn, riix Soo Celinta hayaan From button.
6. Laga bilaabo fursadaha soo bandhigay riix Kies button.
7. On suuqa kala socda, sug ilaa iyo inta baaritaan Wondershare MobileTrans, caasimadii, iyo ku darayaa gurmad Kies faylasha in ay leeg- bidix. Fiiro gaar ah : Waxaad gacanta dooran kartaa gurmad Kies faylasha adigoo gujinaya ku dar gurmad doorasho file ka hooseysa ay leeg- bidix.
8. Ka liiska faylasha gurmad (ay dhacdo badan hayaan Kies), hubi checkbox matalaya mid ka mid ah oo ku jira aad rabto in aad soo celiso iPhone.
9. In ay leeg- dhexe, hubi checkboxes matalaya xog ah in aad rabto in aad soo celiso oo aad iPhone.
10. Optionally, ka fiiri macluumaadka oo cad ka hor inta nuqul checkbox ka hooseysa ay leeg- saxda ah si ay u masixi dhammaan xogta jira ka iPhone ka hor gurmad Kies la soo celiyo waa in.
11. Mar walba waxaa la dhigay, riix Start Copy button ka hooseysa ay leeg- dhexe.
12. On sanduuqa ku xiga, sug ilaa iyo inta xogta ee la doortay waxaa loo soo celiyay in macruufka aad 9 qalab, iyo riix OK marka nidaamka dhameystiray.
13. qeybtii macruufka 9 aalad hor inta aanad bilaabin isticmaalkiisa.
MobileTrans By Wondershare awood u xidhiidhka labada Android iyo qalabka macruufka. Tani waa sababta waxa ay taasi gurmad iyo dib u soo celinta dhammaan nidaamka mid aad u fudud ee dhamaadka isticmaala.
> Resource > Ladnaansho > Habka ugu fudud ee Soo Celinta kaabta Kies in macruufka 9